नेपाल कन्जुमर डिभेलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेपाल कन्जुमर डिभेलपमेन्ट बैंक लिमिटेड
नेपाल कन्जुमर डिभेलपमेन्ट बैंक लिमिटेड
क्षेत्रीयस्तरको विकास बैङ्कका रूपमा स्थापना भएको यो बैङ्कले हाल कास्की जिल्ला पोखराको बेलचोक भरतपुर र सुन्दर बजार–३ लमजुङमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । निकट भविष्यमै बैङ्कले बाँके, दाङ र कपिलवस्तु जिल्लामा शाखा विस्तार गर्ने तयारी पनि गरेको छ । बैङ्किङ, हाउजिङ, लेखापरीक्षण, व्यवस्थापन तथा व्यापार–व्यवसाय क्षेत्रका विज्ञहरूको संलग्नतामा यो बैङ्कले वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । छरिएर रहेको पूँजी सङ्कलन गरी कृषि, उद्योग, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले बैङ्कको स्थापना भएको हो । यही वैशाख १० गतेदेखि यो बैङ्कले अङ्कित मूल्य रू. १ सयका दरले प्राथमिक शेयर निस्काशन गर्ने भएको छ ।
विभिन्न समयमा बैङ्कले प्रकाशित गरेको विवरणपत्रअनुसार हाल बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. १४ करोड रहेको छ । निकट भविष्यमा नै साधारण शेयर निस्काशन गरी चुक्ता पूँजी रू. २० करोड पुर्‍याउने लक्ष्य बैङ्कले लिएको छ । साधारण शेयर वितरणपछि बैङ्कको संस्थापक शेयर रू. १४ करोड र सर्वसाधारण शेयर रू. ६ करोड हुने देखिन्छ । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्म बैङ्कको पूँजी संरचनामा कुनै परिवर्तन हुने सङ्केत देखिँदैन । यसको अर्थ यो अवधिमा कम्पनीले नगद लाभांशमात्र वितरण गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा बैङ्कको खुद मुनाफा रू. ६७ लाख रहेको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो ४७ दशमलव ५४ प्रतिशतले कम हो । गत आवमा बैङ्कको खुद मुनाफा रू. १ करोड २९ लाख रहेको थियो । यो १ वर्षमा बैङ्कले चुक्ता पूँजीमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा बैङ्कको जगेडा कोष करीब ४२ प्रतिशतले बढेर रू. २ करोड ३४ लाख पुगेको छ ।
सोही अवधिमा बैङ्कको निक्षेप सङ्कलन १२ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेर रू. ४१ करोड ९९ लाख पुगेको बैङ्कको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । यो १ वर्षको अवधिमा बैङ्कले लगानीको क्षेत्र विस्तार गरेको देखिँदैन । गतवर्षको तुलनामा चालू आवको दास्रो त्रैमासमा बैङ्कको कर्जा प्रवाहतर्फ ४३ दशमलव ८३ प्रतिशतले घटेर रू. ३७ करोड ६९ लाखमा झरेको छ । १ वर्षको अवधिमा बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी पनि ४७ दशमलव २८ प्रतिशतले घटेर रू. १ करोड ७१ लाख रहेको छ भने सञ्चालन मुनाफा ४७ दशमलव ५८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । सोही अवधिमा बैङ्कको ब्याज आम्दानीमा ४७ दशमलव ७९ प्रतिशतले कमी आएकाले बैङ्कको खुद मुनाफामा कमी देखिएको हो ।
हाल बैङ्कको प्रतिशेयर किताबी मूल्य रू. १ सय ११ रहेको छ । सो मूल्यलाई आधार मान्दा यो बैङ्कले साधारण शेयर निस्काशनपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत हुँदा प्रतिशेयर रू. २ सय ९० देखि रू. ३ सय ३३ सम्ममा व्यापार हुने सम्भावना देखिन्छ ।
शेयरबजार सामान्य रूपमा सुधारको बाटोतिर लागेकाले लगानीकर्तामा थोरै भए पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । साथै, बैङ्कको वित्तीय अवस्था सकारात्मक नै देखिएकाले यो बैङ्कमा लगानी गर्न लगानीकर्ताको चाप बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।